Ingxoxo yevidiyo yamahhala yewebhusayithi
INGXOXO NGEVIDIYO NGESIZA
Xoxa nezithameli zakho kuphela
Ungasebenzisa iseva yengxoxo ehlukile lapho kuzoba nabasebenzisi bakho kuphela. Ungasetha futhi ingxoxo ejwayelekile
Ukulinganiswa kwamavidiyo kwamahhala
Kwesinye isikhathi abasebenzisi bahlukumeza amandla wensizakalo futhi basakaze okuqukethwe okushaqisayo. Siyaqonda ukuthi amavidiyo anjalo onakalisa isithunzi sesayithi futhi enza zonke izindleko zokulinganisela nokuqapha ukusakazwa 24/7.
Noma umsebenzisi eya kusayithi elisemthethweni nganoma yisiphi isizathu, usaqhubeka nokuthola ama-30% wokuthenga ngakunye.
Setha izixhumanisi bese uhola
Ukuze uthole imali, awudingi ukubeka uhlelo lokusebenza kusayithi. Ungavele ubhale izibuyekezo noma izindatshana kweminye imithombo ngokungezwa kwezixhumanisi kusayithi lethu. Kusuka kuyo yonke inkokhelo abasebenzisi abazoyisebenzisa kusuka kuwe ngezixhumanisi, uzobe uthola ukusikwa okungu-30%.
Imibukiso engokoqobo yaseSpain Imibukiso engokoqobo yaseRussia Imibukiso Yangempela YaseJalimane Ingxoxo endala Imibukiso yangempela Ukusakazwa kwevidiyo Ingxoxo yevidiyo yamasayithi I-videochat eku-inthanethi Ingxoxo ye-Cam I-roulette yengxoxo